I-China Yesimanje Elula Elimhlophe Oak Isitayela saseJapan Ifenisha Yesofa Ehlanganisiwe Isofa Ifenisha # 0027 Ukwakha kanye nefektri | Yamazonhome
Isitayela Sesimanje Esimhlophe Esimhlophe Oak IsiJapan Ifenisha Yesofa Yesofa # 0027
Inombolo imodeli: Amac-0027
Usayizi: Isihlalo Esiphindiwe: 1370 * 750 * 840mm
Izihlalo ezintathu: 1970 * 750 * 840mm
Usofa wasebusika kanye nehlobo wezinhloso ezimbili
Uhlaka jikelele lungeniswa nge-oki emhlophe engenisiwe, lonke uhlaka lwebhodi, ukwakheka kwangempela okubili kwezinhloso zasebusika nasehlobo, kubuye kukhululeke ukuhlala ngaphandle komcamelo, kanti ingxenye epholile isezinqeni. Imigqa ilula futhi inhle, futhi ukwesekwa kuhle. Ibhodi ngalinye lezinkuni lipholishiwe ngesandla futhi ubungcweti bukhulu kakhulu ukuqinisekisa ukuvumelana. I-backrest ephezulu iqinisekisa ukunethezeka nokuphumula kwakho, ikunikeze umuzwa omuhle wosofa ....
Ukuqina kwesiponji okuphezulu
Isikhukhi sesipanji esisebenza kahle kakhulu, esigcwele isiguqo sezipanji esisezingeni eliphakeme, indwangu yekhava yesihlalo yenziwe ngokhuni nolwelineni oluhambisana nesikhumba, futhi iphathwe ngemithi yokugqoka, ayikho ibhola, ayinasikhunta, ayipheli, ingxabano futhi akukho static ugesi. Ukujula kokuhlala kusofa kuhlolwe izikhathi eziningi, futhi ukuphakama okuhle kuklanywe ngokwesayensi. Lapho izivakashi zifika endlini, i-backrest ingasuswa ukwenza umbhede wesikhashana.
Idizayini eyenziwe ngabantu yama-armrests agobile
I-chamfer emise okwe-arc ifakwe iphucuziwe ngesandla ukuvimbela ukuqhuma, bushelelezi kuze kube lapho kuthinta khona, futhi ixhunywe isakhiwo se-tenon-and-mortise, esiqinile futhi esiqinile. Uhlaka oluqinile lwokhuni, ukhuni lukhuni, noma ngabe ugxuma kanjani, usofa ngeke unyakaze, ungakusekela ukuma kwakho konke ngaphandle kokukhathazeka ngokuwa. Izingalo zengalo ezigobile zisekela ngokuphelele izandla nezingalo zakho, zikuvumela ukuthi uphumule zonke izingxenye ngokunethezeka.
Vimba imilenze yosofa
Ikhoneni ngalinye lohlaka lukasofa lipholishiwe ukuze libe yindilinga futhi libushelelezi, okwenza likhululeke kakhulu ukuncika kulo, futhi ngeke lithinte zonke izitho zomzimba. Imilenze yosofa yenziwe ngezinto eziqinile nezisindayo zokubamba isisindo ngokuqinile. Iphansi lemilenze kasofa alishibilikisi futhi alikwazi ukumelana nokugqoka, okuvikela iphansi lakho nokwelula impilo kasofa.
Indawo yokuhlala esusekayo futhi engagezeka
Idizayini yokuhlala esofa engatholakali futhi egezekayo, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngenhlanzeko. Impilo isinikeza izimfanelo zokuzola nokuphumula, isabalalisa imizwa yenjabulo, futhi injabulo igcwala ngokungenhloso endlini entsha.
Imibala ehlukahlukene yesitayela
Umuthi we-oki waseNyakatho Melika okhethiwe, okokusebenza kweminyaka engu-100, ngamandla aphezulu womshini, ukuthungwa okucacile, kanye nenani eliphakeme lokhuni. Amasilayidi amakhulu ahlanganiswe ngqo, ngezinto zokwakha eziqinile, aqinile futhi ahlala isikhathi eside.
Langaphambilini ISUP paddle board color matching inflatable surfboard enezimpiko 0372
Olandelayo: I-Sterner Pet Metal Main House Izindlu Ezincane Zokuchitha Izilwane nge-Element 0244
Umbhede weSofa Onethezekile
I-Double Recliner Sofa
Isethi Yasofa Yanamuhla
Umbhede Wosofa Onesitoreji
Umbhede weSihlalo Sofa
Ikhoneni LeHhovisi Luhlaka Oluqinile Lwezinkuni ...